Su'aalaha Adag Ee La Weydiiyo Qofka Aad Jeceshahay Kahor Intaadan Ismehersanin - Aayaha
Aayaha editorDecember 29, 2019
Haddii aad ku jirto xiriir dhab ah, waxaa jirta fursad weyn oo ah in xiriirkaas uu ku dhammaan karo guur.
Guurka ma ahan wax lagu kaftamo wuxuu ka dhiganyahay inaad naftaada u hibeysay qof adigoo taas badalkeed ka rajeynaya.
Markay isguursanayaan labada qofood midkood ayaa rajeeya in guurka uu ka gudbo imtixaanka waqtiga isla mar ahaantaana uusan ku dhammaan furriin.
Si loo yareeyo fursadaha keeni kara furriin, waa muhiim in lamaanahaaga aad weydiiso dhowr su’aalood oo muhiim ah.
Mid kamid ah su’aalaha muhiimka ah ee la weydiin karo ayaa la xiriirta lacagta, Andrea Bonior, oo ah khabiir xagga xiriirka ayaa tiri. Weydii isaga ama iyada sida labadiinaba aad u wadaagi doontaan mas’uuliyadaha dhaqaale.
Yaa qaadaya qeybta ugu weyn ee mas’uuliyaha? Miyaad si siman u wadaageysaan mas’uuliyadaha dhaqaale?
Waxaad sidoo kale u baahan tahay in lamaanahaaga aad wax ka weydiiso xaaladdiisa ama xaaladdeeda caafimaad.
Miyuu midkiin qabaa xaalad caafimaad darro? Sidee buu isaga ama iyada ay ula tacaashaa walaaca iyo sida aad labadiina uga qeyb qaadaneysaan daryeelka caafimaad ee midba kan kale?
Waxaad sidoo kale u baahantahay in lamaanahaaga aad weydiiso waxyaabaha uu ka cabsado ama uu ka baqo iyo kuwa uu necebyahay kuwaas oo kaa caawin doona inaad si wanaagsan aad u fahamto, sida ay ku talisay Lea Rose Emery.
Inkastoo su’aasha ku saabsan jecaylkaadi hore ay tahay mid ay adagtahay in la isweydiiyo hadana waxay kaa caawineysaa in xiriiradaadi hore aysan caqabad ku noqon guurkaaga, sida ay ku talisay Eleanor Stanford.
Jacaylku kama dhigo guurka mid shaqeeya, saddexdaan waxyaabood oo ka dhigo mid shaqeeya
3 Ammaan oo nin kasta uu ka rabo xaaskiisa… Ka dhig guurkaaga mid guuleysta
7 Sharci Oo Xaga Taleefanka Ah Oo Ay Tahay In Lamaaneyaashu Ku Dhaqmaan